Blockchain Izindaba 27 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 27 Januwari 2018
$524M NEM ezebiwe Hack zokwenana Japanese Coincheck
Japanese cryptocurrency exchange Coincheck waqinisekisa ukuthi $524 million lwemali digital intshontshiwe-cishe okwenza kube Hack eyodwa enkulu kunazo zonke ku-exchange, ngisho outweighing le Mt. Gox ukwephulwa 2014.
Yilokho ngokusho kombiko wephephandaba Japanese Asahi Shimbun yaseTokyo, okuyinto ibika ukuthi Coincheck wathi abanye 500 abayizigidi ezingu-amayunithi we cryptocurrency eyaziwa ngokuthi NEM, mayelana kuwufanele 58 bhiliyoni yen, wayethunjiwe kusukela wallets amakhasimende '.
manje esigxotsheni uwile ukuba mayelana $430 abayizigidi ezingu, zimali spooked ukuthengisa off Holdings zabo kulandela amahebezi we Hack ngaphambili ngoLwesihlanu.
Coincheck kubikwa usazama ubunjalo kuhlasela, kodwa kuqashelwe ukuthi ezinye cryptocurrencies awazange nomthelela. Abanye abagxeki ukhombe yokuntuleka Coincheck sika multi-SIG wallets, lapho okhiye amaningi kudingeka ukugunyaza ukuthenga, njengengxenye nezintuba lula Hack.
inkampani amandla Canadian izosebenzisa igesi yemvelo ukuze cryptocurrency okwami
Nge igesi yemvelo amanani kulindeleke ukuba ahlale ongaphakeme, omunye Alberta umkhiqizi kukhuphuke ngendlela inoveli lokuthuthukisa umzila wayo phansi: usebenzisa ukusakaza yayo igesi kumaseva we amandla kukhompyutha uyokumba cryptocurrencies engase imali eningi ezifana Bitcoin.
Iron Ibhuloho Resources Ltd. wamemezela ke ezaziyoba osizayo omusha obizwa ngokuthi Iron Ibhuloho Technology ngomzamo ukujoyina cryptocurrency futhi blockchain Craze - kodwa futhi ukuba Arbitrage umehluko phakathi ukubaluleka Bitcoin, Okwamanje zenani US $ 11.188 uhlamvu ngayinye, futhi AECO igesi, Okwamanje zenani $1.98 ngamunye izinkulungwane cubic meter.
Iron Ibhuloho ihlele ashise igesi futhi ukukhiqiza ugesi, futhi usebenzise lolo ugesi amandla zekhompyutha izimayini lwemali digital.
Uma kucatshangwa ukuthi 215 kilowatt amahora ugesi ukuze kuphume omunye Bitcoin, Iron Ibhuloho angazuza US $ 49 MCF ngalinye igesi yayo.
Lokho ngaphezu 30 izikhathi intengo Iron Ibhuloho okwamanje uthola igesi yayo, sicabangela zamanje AECO futhi Bitcoin amanani.
"Ngokwazi Ngikhathazekile, zonke igesi ezomile umkhiqizi embonini Kufanele uthole lift kule izindaba, ngoba amabhodi yabaqondisi bayahamba ukuzibuza ukuthi kungani izinkampani bezingeke zikwazi ukunikezela ingxenye ukukhiqizwa yabo kule. "kusho GMP FirstEnergy Iphini likasihlalo kanye co-inhloko amandla yokuthengisa kanye nokuhweba Trent Boehm.
Yahoo kuhlanganisa BTC t ...
Thumela Previous:Chainalysis – inkampani owabhubhisa yokufihla Bitcoin
Thumela Landelayo:Ngiyinika kanjani Lost Cishe 200 Bitcoin Ukuhweba kule nyanga edlule